Kwusaa Ngwaahịa Rlọ Ahịa Gị na Milo | Martech Zone
Kwusaa Ngwaahịa Rlọ Ahịa Gị na Milo
N’izu gara aga, mụ na Rob Eroh, onye na-agba ngwaahịa na injinịa na ya kwurịtara okwu Milo. Milo bụ ụlọ ọrụ ọchụchọ ụlọ ahịa dị na mpaghara nke jikọtara ya na Point of Sale (POS) ma ọ bụ Atụmatụ Ntanetị Enterprise (ERP). Nke a na - eme ka Milo bụrụ injin na - achọ ihe kachasị mma ma a mata ihe dị na mpaghara gị. Ihe mgbaru ọsọ Milo bụ nwee ngwaahịa ọ bụla na shelf ọ bụla na akụkọ ọ bụla na weebụMa belata oke nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na n'ịntanetị. Ha na-arụ ọrụ mara ezigbo mma ugbua!
Companylọ ọrụ ahụ dị obere na afọ 2.5 mana ha enwetalarị ndị na-ere ahịa 140 nwere ọnọdụ 50,000 gafere United States na ha na-agbakwunye kwa ụbọchị. Ọ bụ usoro dị mfe nke na-enye ọrụ mara oke egwu. Milo na-ere ahịa buru ibu… na-acho ya ugbu a ma achoghi ichere nnyefe (dika m!). E nwere ihe ọ bụla ọzọ na-akụda mmụọ karịa na-egosi na a ụlọ ahịa na-enwe ha na-nke yiri nkata… otú Milo ka lekọta nke, oke. A bụ ihe atụ search m mere maka LCD televishọn gburugburu Indianapolis:
Isi ihe ga-eme ka Milo nwee ihe ịga nke ọma bụ na ha gbalịsiri ike ijikọ… n'eziokwu, ha malitere Milo Fetch, ọrụ beta na mwekota na Intuit QuickBooks Point of Sale, Intuit Quickbooks Pro, Microsoft Dynamics Retail Management System, Retail Ebe a na-ere ere na Comcash.
Milo Ndepụta Ngwaahịa adịworị site na RedLaser, a free scanning ngwa n'ihi na iPhone na gam akporo. Milo dịkwalarị na android. Na 2012 Milo na-abanye n'ime ngwa ngwa eBay ndị ọzọ. E wezụga na naanị nchọta, Milo na-anwale atụmatụ ndenye ọpụpụ, kwa. Chegodi… ichota ihe, zutara ya ma puta ebe ahia nwere ya!
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa, nweta ngwa ahịa gị n'ịntanetị ugbu a Milo.
Tags: Ebe a na-ere ere nke ComcashebayIntuit QuickBooks Point nke ire ereNtughari Quickbooks Proọchụchọ ịzụ ahịa na mpagharaMicrosoft Dynamics Retail Management Usoromilomilo ikwoAzụmahịa Pro
Kedu otu Google Adwords si arụ ọrụ
Ntọala Boot nke LinkedIn
Mar 21, 2012 na 4: 26 AM
Doug, nke a na-echetara m ntakịrị Zaarly na ọkacha mmasị m, TaskRabbit.